आदिवासी जनजाति अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको कमजोर पक्ष | Everest Times UK
यस्ता छन् नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयहरु ?
७ औ नदीपुर कप ग्रीनविच भलिबल परिवार लण्डनको हातमा
नयाँदिल्ली हिंसामा मृतकको संख्या ३२ पुग्यो
राष्ट्रियसभामा दोहोरीः ललिता निवास र अडियो प्रकरणको छानबिन माग
माले महासचिव मैनाली परिवारसहित दुर्घटनामा, हेलिकप्टरबाट काठमाडौं पठाइयो
व्यवसाय र समाजसेवाका पर्याय ‘टिकटक हिरो’
विश्वव्यापी सांगीतिक भ्रमणमा एक्साइटेड छु : विकास तुम्बापो (लिम्बू)
दिल्लीमा हिंसा भड्कियो, २१ जनाको मृत्यु
मगर दिवसमा सार्वजनिक बिदा
मातातीर्थको जग्गा : कैफियत छैन, भूमिहीन र जोताहाको पक्षमा छ- बाबुराम भट्टराई
राष्ट्रिय काँठे लोकदोहोरी महोत्सवको तयारी पूरा (विज्ञप्तिसहित)
वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने नेकपाको निर्णय, प्रधानमन्‍त्री ओली असन्तुष्ट
लोकतान्त्रिक पार्टीको दोस्रो स्थापना दिवस मनाइयो (कार्यसमिति बैठकबाट पारित प्रतिवेदनमा के छ ?)
भारतमा भएको झडपमा सात जनाको मृत्यु
सांसदले भने, ‘दक्षिण कोरियामा कोरोना भाइरस फैलियो, उद्धारको तयारी के छ’
Series of house burglaries – key safe boxes.
खेलकुदमन्त्री विश्वकर्माको आश्वासन – सहारा एकेडेमीलाई वार्षिक ५ लाख दिने गरी रातो किताबमै पाछौं
एउटै मञ्चमा मगर दिवस र लखन थापा स्मृति दिवस मनाइयो
अल्डरसट इम्पावरमेन्ट ईभेन्ट इन्भेष्टमेन्टमा केन्द्रित, थमस रिगको विशेष प्रस्तुति
चार भञ्ज्याङद्वारा टेलिमेडिसिन सहयोगार्थ च्यारिटी कार्यक्रम आयोजना
प्रधानमन्त्रीतिर सोझिएको प्रश्न
ब्रिटिश गोर्खाको पक्षमा
‘मारक्यु’ मार्च १ मा यूकेमा प्रदर्शन हुने
गोर्खा कप तयारीमा तमुधिं यूके, प्रतियोगिता व्यवस्थित गर्न कमिटी गठन
बिसीसीमा मेडिटेशनबारे छलफल
एनआरएनए यूके अध्यक्ष पुनमको नेपाल डायरी : म्याराथन दौडदेखि उच्च राजनीतिक भेटसम्म
कोरियामा कोरोना भाइरस फैलिएपछि नेपालबाट कामदार पठाउन रोकियो
काँग्रेसले प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध नगर्ने
मलेसियाका प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए
ग्याल्बो ल्होसारमा नेकपा अध्यक्ष दाहालको शुभकामना
आदिवासी जनजाति अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको कमजोर पक्ष
मोहन गोले तामाङ
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले कातिक १ र २ गते काठमाडौंमा नेपाली आदिवासी जनजातिहरुको प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति सम्मेलन सम्पन्न गर्‍यो । अपर्झट नेतृत्वको दिमागमा फुरेर करिब एक डेढ महिनाअघिबाट सुरु गरिएको सम्मेलनको प्रचारप्रसार फेसबुकमा राम्रै थियो । तर कार्यक्रमको स्वरुप, त्यहाँ प्रस्तुत गर्ने विषयहरु र त्यसले प्राप्त गर्ने उद्देश्यको बारेमा हामीजस्ता जातीय संस्थाको नेतृत्वहरु नै धेरैजना अनविज्ञ थियौं । अन्तिम क्षणतिर महासंघले एउटा तयारी मिटिङमा बोलायो तर त्यहाँ पनि कार्यक्रमको स्वरुप र त्यसबाट प्राप्त गर्ने उपलब्धिहरुको बारेमा ब्यापक छलफल हुन सकेन । कातिक १ गते राष्ट्रिय सभागृहमा ११ बजेदेखि उपराष्ट्रपतिज्यूबाट कार्यक्रम उद्घाटन हुने सूचना थियो तर पछि नेफिनको पूर्व अध्यक्षहरुबाट दिउँसो १ बजेदेखि ढोल बजाएर सामूहिक उद्घाटन गरियो ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एमडी कुलमान घिसिङ र वैज्ञानिक महाबीर पुनलाई दोसल्ला ओढाएर सम्मान गर्ने कुरा सुनेको थिएँ । त्यो पनि हल्लैमात्र भयो । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन जस्तो कार्यक्रममा ५०० जना सीट क्षमताको सभागृह हल मुश्किलले भरियो । जेहोस् उद्घाटन सत्र भनेको देखाउने, रुप पक्ष थियो त्यो राम्रैसँग सकियो ।
भोलिपल्ट बन्दसत्र पार्क भिलेज होटेल बुढानिलकण्ठमा बिहान ८ बजेदेखि सुरु हुने भनिएको थियो । म लगायत थुप्रै जातीय संस्थाका प्रतिनिधिहरु निर्धारित समयमा नै पुग्यौ । त्यहाँ पुग्दा पनि हामी धेरैजनालाई बन्दसत्रको कार्यक्रम तालिकाको बारेमा थाहा थिएन । केही साथीहरु मलाई सोधिरहेका थिए, आज यहाँ के हुन्छ ? जब कि म स्वयंम्लाई नै थाहा थिएन । खाजानास्ता खाइसकेर लगभग डेढ घण्टा ढिलो गरी कार्यक्रमको हल खुल्यो । हामी प्रतिनिधि शुल्क बुझाएपछि पाएको कार्ड र झोला बोकेर भित्र पस्यौ । कार्यक्रम सुरु हुँदा लगभग ११ बजिसकेको थियो । त्यसपछि पनि आसनग्रहण र परिचय जस्ता भद्दा र औचित्यहीन प्रक्रियाले बन्दसत्र जस्तो कार्यक्रमको एक घण्टा बढी समय खायो । कार्यक्रम सञ्चालनको तरिका हेर्दा आदिवासी संस्थाको नभएर विकासे एनजिओको शैलीमा सञ्चालन भइरहेको लाग्थ्यो । त्यसपछि महासंघको उपाध्यक्ष गोबिन्द छन्त्यालज्यूले महासंघको सांगठनिक गतिविधिको बारेमा आफ्नो प्रस्तुति राख्नुभयो । लगत्तै विभिन्न देशको नेफिनको तर्फबाट आफ्नो सांगठनिक गतिविधिहरुको प्रस्तुति सुरु गरियो ।
कार्यक्रम ढिलो सञ्चालन भए पनि खाना खाने समय भने दिउँसो २ बजेदेखि निर्धारित समयमा नै सुरु भयो । खानापछि पनि केही देशका साथीहरुको प्रस्तुति बाँकी भएकोले त्यसलाई निरन्तरता दिइयो । प्रस्तुति सकिएपछि महासंघका सल्लाहकार डा. मुक्तसिंह लामाज्यूबाट विश्व आदिवासी आन्दोलनको अवस्था, चुनौती र सम्भावना यस्तै विषयमा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने काम भयो । यो समयसम्म आइपुग्दा लगभग साँझको ५ बजिसकेको थियो । साँझ ५ बजे सबै कार्यक्रम सक्ने भनिएकोमा डा. मुक्तको प्रस्तुतिपछि महासंघको उपाध्यक्ष किरण सुनुवारज्यूले विधानको मस्यौदा प्रस्तुत गर्दा लगभग ६ बज्यो । त्यसपछि बन्दसत्र हल एकप्रकारको अस्तब्यस्त जस्तै भयो । महासंघको पूर्वअध्यक्षहरु परशुराम तामाङ र डा. ओम गुरुङज्यूले सहजिकरण गर्ने प्रयास गर्नुभयो तर त्यो पनि त्यति काम लागिरहेको थिएन । बन्दसत्रको अध्यक्षता गरिरहनु भएका महासंघको अध्यक्ष जगत बरामजीले हललाई कमाण्डिङ गर्न सक्नु भएन । उहाँ विपक्षी दलको अवरोधलाई रोक्न नसकेर सदन सुचारु गर्न नसकेको संसद् भवनको सभामुख जस्तो देखिनु हुन्थ्यो । हललाई सम्हाल्न नसकेपछि विदेशी संस्थाका साथीहरुको छुट्टै छलफल चलाउने र त्यो खाली समयमा खाने खाने भनियो । लगभग रातको ८ बजिसकेको थियो । कार्यक्रमको तालिकाअनुसार अन्तिममा घोषणापत्रमाथि छलफल गर्ने भनिएको हुँदा म त्यसको लागि पर्खिरहेको थिएँ । जब अध्यक्ष जगत बरामजीबाट घोषणापत्रलाई लिएर हलमा छलफल नगरौ । भोली २, ४ जना बसेर यसो खासखुस तयारी गरौला र पत्रकार सम्मेलनमा बाँडौला नी भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो । एउटा महत्वपूर्ण कामलाई प्राथमिकता नदिएको बुझेपछि म हलबाट बाहिरिए । त्यसपछि त्यहाँ के के गरियो ? मेरो जानकारीमा छैन । साथीहरुले बताउनु भए अनुसार विदेशका पाहुनाहरुलाई मायाको चिनो बाँडियो र कार्यक्रम समापन गरियो भन्ने सूचना आयो ।
मैले अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति सम्मेलनबाट अलि फरक अपेक्षा राखेको थिएँ । यसले एउटा आन्दोलनको कार्यदिशा पास गर्छ र संसारको आदिवासीहरुको तागतलाई एकठाउँमा केन्द्रीकृत गरेर लैजान्छ भन्ने लागेको थियो । किनकि जगत बरामजीले महासंघको नेतृत्व सम्हालिसकेपछि नै हामी राज्यसँगको तीनवटा लडाइँमा हारिसकेका थियौ । पहिलो, प्रदेश र स्थानीय तहको नामाकरण, सीमाङ्कनको लडाइँमा हार्‍यौ । दोस्रो, आदिवासी जनजातिको सार्वजनिक बिदा कटौती बिरुद्धको लडाइँमा हार्‍यौ । तेस्रो स्थानीय तह पदपूर्ति विज्ञापनमा लोकसेवा आयोगले गरेको आरक्षण कटौती विरुद्धको लडाइँमा पनि हार्‍यौ । यसरी पटक पटकको मोर्चामा हारिसकेको हामीहरु नयाँ रणनीतिका साथ अघि बढ्ने योजना निर्माणमा केन्द्रीत रहेर सम्मेलन अघि बढाउनु पथ्र्यो । जहिले आन्दोलन गर्दापनि माइतीघर मण्डलामा देखिने ५०० को उपस्थितिलाई कसरी ५० हजार पु¥याउने त्यसको तयारी गर्नुपथ्र्यो । किनकि अहिलेको सरकार कुनै राजा, महाराजाको निरंकुश सरकार होइन, जनताबाट हाम्रै मत पाएर जितेको निर्बाचित सरकार हो । जनताबाट निर्बाचित सरकारलाई सडकमा ५० हजारभन्दा बढी आन्दोलनकारीको टाउकाहरु प्रदर्शन गर्ने बितिकै झुकाउन सकिदो रहेछ भन्ने त गुठी आन्दोलनले पनि देखाइसक्यो । त्यसैले आन्दोलनलाई कसरी उठाउने भन्ने विषयमा सम्मेलनको मुख्य ध्यान त्यतातिर केन्द्रीत हुनुपथ्र्यो । तर त्यो हुन सकेन । जब बन्दसत्रमा दिउँसो ४ बजेसम्म पनि आन्दोलनको कुरा नउठेपछि नेफिन धनकुटाका आनन्द सन्तोषी राईले मलाई निराश हुँदै सोध्नुभयो– होइन, अध्यक्षज्यू साथीहरुले आन्दोलनको बारेमा चैँ कतिखेर छलफल गर्छ हौ । मैले उहाँलाई ड्राफ्ट घोषणापत्रमा आन्दोलनको बारेमा केही मोडालिटीको प्रस्ताव गरेको छु । त्यसमा अलि बढी छलफल गर्नुपर्छ भनेर आश्वस्त पारे ।
कार्यक्रमको दौरानमा घरिघरि नेफिन उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता नबिन रोका मगरज्यूको भाषणमा आन्दोलनको गन्ध आउँदा मजस्ता बिद्रोही चेतका मान्छेहरु त्यो गन्ध सुँघेर केही अघाए जस्तो अनुभूति गर्थ्यौ । कार्यक्रम हुनु आफैमा राम्रो काम हो । यसले हामी बीचमा भेटघाट गरायो । त्यो ठीक छ तर नेतृत्वहरु कार्यक्रमबाट निकाल्ने चिजको बारेमा क्लियर भएनन् भने त्यो औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुन पुग्छ । गत बर्ष पनि नेफिनले राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन तमु हल नयाँ बसपार्कमा सम्पन्न गर्‍यो । त्यसले छायाँ संसद समेत गठन गरेर जान सक्ने ध्वाँस पिट्यो तर आन्दोलनको ढर्रा पुरानै पाराबाट सञ्चालन गरिरहँदा उपलब्धि हात लागी शून्य निस्कियो । मेरो कुरा के हो भने यो सम्मेलन पुरै आगामी आन्दोलनको दिशा र स्वरुपको बारेमा केन्द्रीत हुनुपथ्र्यो र त्यही आन्दोलनले जगत बरामजीहरुलाई इतिहासमा भुल्न नसक्ने सम्मानित आदिवासी नेताको रुपमा स्थापित गथ्र्यो । किनकि कार्यक्रम मात्रै गर्ने मान्छेहरु नेता हुँदैनन् । औपचारिक कार्यक्रमले संस्थाको प्रतिवेदन मोटो हुन्छ, नेता चैँ दुब्लै भएर रहन्छन् । ती त कार्यक्रमको कुर्सीमा बसुञ्जेलसम्मका लागि मात्रै नेता जस्तो देखिन्छन् । त्यसपछि सकिएर जान्छ ।
सम्मेलनको रुप पक्षलाई विष्लेषण गर्ने हो भने राष्ट्रिय सभागृहको उद्घाटन सत्रमा यदि प्रमूख अतिथि कन्फर्म भएको छैन भने नआउने मान्छेको त्यसरी फोटो टासेर प्रचार प्रसार गर्नु हुँदैन थियो । यो हामी पटक पटक गल्ती दोहोर्‍याइरहेका छौ । विगतमा पनि विश्व आदिवासी दिवसमा प्रमूख अतिथि प्रधानमन्त्री आउनुहुन्छ भनेर खुब प्रचार गरियो, पछि कुर्सी खाली राखेर कार्यक्रम गर्नुपर्‍यो । यसले समुदायको नेतृत्वमाथिको विश्वसनीयता घटाउँछ । अर्को सम्मेलनको बन्द सत्र भनेको सार उपलब्धि प्राप्त गर्ने मुख्य कार्यक्रम हो । यसमा मिनेट मिनेट समयको पनि ठूलो महत्व हुन्छ । जब कि हामीले एक डेढ सय मान्छे बीचमा परिचय कार्यक्रम राखेर त्यहाँ एक डेढ घण्टा समय बेकारमा बर्बाद गर्‍यौ । जुनकि नाम भन्ने बेलामा मात्रै त्यो ब्यक्तिको नाम थाहा हुन्छ । त्यसपछि कसैले पनि चिन्न सकिँदैन । २०, ३० जनाको उपस्थितिमा कम्तीमा ३ दिनसम्म चल्ने तालिम, गोष्ठीको लागि भने यस्तो परिचय कार्यक्रम उपयोगी हुनसक्छ । यो विकासे एनजिओको पेष्ट प्रोग्राम नराखेको भए हुन्थ्यो । अर्को महासंघको सल्लाहकार मानवशास्त्री डा. मुक्तसिंह लामाज्यूलाई बन्द सत्रमा विश्व आदिवासी आन्दोलनको अवस्था र चुनौती विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्न समय दिइयो । उहाँको प्रस्तुती एकदमै राम्रो थियो तर यस खालको प्रस्तुती कुनै कार्यशाला गोष्ठी वा तालिममा प्रस्तुत गर्न उपयुक्त हुन्छ । सम्मेलन, अधिवेशनजस्तो कार्यक्रममा उपयुक्त हुँदैन । त्यस्तै विदेशस्थित संघ, संस्थाका प्रतिनिधिहरुले आआफ्नो देशको गतिविधिको बारेमा रिपोर्टिङ प्रस्तुत गर्नुभयो । यो केही हदसम्म ठीकै छ तर उहाँहरुको प्रस्तुतिमा न महासंघ संघीय सचिवालयबाट सुझाव दिने काम भयो न हलबाट नै । यो खण्डको काम पनि खाली पढी, वाची सुनाउने कर्ममा मात्रै सीमित भयो ।
कार्यक्रमको सेड्युल अनुसार अन्तिम समयमा प्रस्तुती गर्ने भनिएको घोषणापत्रमाथिको छलफल कार्यक्रम थियो । यसको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मा महासंघको अध्यक्ष जगत बरामजी र उपाध्यक्ष गोबिन्द छन्त्यालजीबाट मौखिक रुपमा २ दिनअघि मात्रै मलाई आग्रह गर्नुभएकोले मैले जसोतसो लेखेको थिएँ । त्यसलाई पावर प्वाईन्टमै हलमा प्रस्तुत गर्ने र हलको सुझाव लिएर अन्तिम रुप दिने मेरो तयारी थियो । हलमै प्रस्तुत गर्न नपाएपछि त्यसको औचित्य र अर्थ त्यही सकियो । किनकि त्यहाँ प्रस्तुत गरिने घोषणापत्र भन्दा पनि मैले हाम्रो सामूहिक प्रतिवद्धता पत्रको ढाँचामा लेखेको थिएँ । यसअघि हामीले कार्यक्रम नै पिच्छे कहिले १३ बुँदे त कहिले २२ बुँदेसम्मका थुप्रै घोषणापत्र जारी गर्‍यौ । ती घोषणापत्रहरु कुनै काम लागेनन् । ती खाली नेतालाई भाषण गर्ने र पत्रकारलाई समाचार लेख्ने मसलाको रुपमा मात्रै प्रयोग भयो । घोषणापत्र आफैमा बाध्यकारी चिज होइनन् । त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नेतृत्व गर्ने ब्यक्तिको इमानदारिता र नैतिकतामा भर पर्छ । बेइमानहरुको लागि घोषणापत्र दुनियाँलाई देखाउने कागजको खोस्टो मात्र हो । आजसम्म जारी गरिएका घोषणापत्र अनुसार हामी कुनै संस्थाका अभियन्ताहरु कहिल्यैपनि हिडेनौ । ती दस्तावेजीकरणमा मात्रै सीमित थन्किएर बस्यो ।
त्यसैले मैले यसलाई घोषणापत्र नभनी हाम्रो सामूहिक प्रतिवद्धतापत्र भनेको थिएँ । प्रतिवद्धतापत्र आफैमा हाम्रो सामूहिक कसम हुनाले यो चैँ कार्यान्वयन हुन्छ कि भन्ने पनि लागेको थियो । ५ पेजमा तयार गरेको प्रतिवद्धता पत्रलाई प्रस्तावना, बिगतको आन्दोलनको संक्षेपमा समिक्षा र त्यसमा टेकेर जान सकिने हाम्रो सामूहिक प्रतिवद्धताहरु, राज्यसँगको हाम्रो साझा मुख्य मागहरु र त्यसका लागि सञ्चालन गरिने आन्दोलनको रणनीति समेत ५ खण्डमा विभाजन गरेको थिएँ । यो एउटा मस्यौदा मात्रै थियो । यो अस्थिपञ्जरलाई हलमा देखाएर प्रष्ट पार्ने मौका पाएको भए हलबाट त्यसमा मासु भर्ने काम हुन्थ्यो र त्यसले पूर्णता पाउथ्यो । हामी नयाँ पुस्ता भनेर जति नै गर्व गरेपनि एकदमै पुरानो मानसिकतामा छौ । बिगतमा जे गरियो, त्यही गर्ने सोचभन्दा माथि उठ्न सकेका छैनौ । घोषणापत्र भनेर जहिले मागपत्र जारी गर्छौ । त्यसमा आफ्नो भूमिका के हुने ? रणनीति कस्तो बनाउने ? ककसले के के गर्ने ? भन्ने कुरा हुँदैन । यसले गर्दा एउटा काम गर्नुपर्छ भन्ने लाईनलाई समातेर त्यो प्रतिवद्धता पत्र तयार भएको थियो । हलमा प्रस्तुत गर्ने मौकै नमिलेपछि त्यसको मर्म कसैले बुझ्ने कुरा पनि भएन । भोलिपल्ट त्यो प्रतिवद्धतापत्रलाई काटकुट पारेर, त्यसको रुप, नक्शा, भावना सबै बिगारेर पुरानै अनुहारको दुरुस्त बनाएपछि गोबिन्दजीले पत्रकार सम्मेलनमा बाँड्नु भयो भन्ने अनलाईन न्यूजहरुबाट जानकारी पाएँ ।
त्यसैले यदि हामी साँच्चै आदिवासी आन्दोलनलाई उठाउने नै हो भने हिम्मतका साथ जीवनको २, ४ बर्ष समुदायलाई समर्पण गरेर अघि बढौ । विदेशको साथीहरुको भावना उच्च छ, त्यसलाई हाम्रो सही योजनासँग जोड्न सक्यौ भने अहिलेको नश्लीय सत्तालाई झुकाउन सकिन्छ भन्ने मेरो निष्कर्ष हो । त्यो दिन म त्यति धेरै टाढा देख्दिनँ । नत्र यसखालको घोषणापत्र जारी गरेर रित पुर्‍याउने कर्म मात्रै हुनेछ । किनकि कागजहरु निर्जिव हुन्छन् । त्यसले किताबको पानाबाट उठेर आफै बिद्रोह गर्दैन । बिद्रोह त तपाई हामी जस्ता अभियन्ताले गर्नुपर्छ । त्यसको लागि कागज एउटा आधार हुनसक्छ । जसरी माओवादीले २०५२ सालबाट जनयुद्ध सुरु हुन अघि ४१ बुँदे मागपत्रको कागज देउवा सरकारलाई बुझाएर जंगल पसेका थिए । अहिले गणतान्त्रिक युगमा जंगल नै पस्नुपर्ने अवस्था छैन । गाउँ पस्दा मात्रै हुन्छ । तर काठमाडौबाट ऐलान गरेको भरले आन्दोलन उठ्दैन भन्ने त हाम्रै बिगतको अभ्यासले पुष्टि गरिसक्यो । अब फेरिपनि त्यही असफल प्रयत्न नगरौ भन्ने हो ।
मेरो आग्रह मान्नुहुन्छ भने, अब ढिला नगरी हाम्रा न्यायपूर्ण मागहरुको बुँदा क्लियर गरौ । तीन महिनाभित्र सामूहिक रुपमा त्यसलाई लाखौ आदिवासी जनजातिको हस्ताक्षरसहित राज्यको कार्यकारी प्रमूख प्रधानमन्त्रीलाई लगेर बुझाऔ । यी मागहरु पुरा गर्दैनौ भने हामी आन्दोलनमा गयौ भनेर प्रष्ट भनेर गाउँ पसौ । कम्तिमा एक, दुई बर्षभित्रमा एउटा शक्ति निर्माण गरौ र निर्णायक आन्दोलनको संखघोषका साथ कफन बाँधेर फिल्डमा उत्रौ । यदि यो हिम्मत छैन भने माइतीघर मण्डलामा २, ४ सयको संख्यामा आदिवासी जनजातिलाई ठुटे बजारमा जस्तो प्रदर्शन गरेर सत्तालाई जिस्क्याउने काम नगरौ । यसखालको आन्दोलनले जगत बरामजीहरु धेरैपटक पुतलीसडकमा ढल्नुपर्छ । मोहन गोलेहरुको धेरैपटक टाउकोमा टुडुल्को उठ्नेछ । तर हाम्रो माग सम्बोधन हुने छैन ।
तसर्थ मेरो अन्तमा, यो सम्मेलनको विशेष डिजाइनर जगत बरामजी र गोबिन्द छन्त्यालजीलाई आग्रह के हो भने यो सम्मेलनमा पनि महासंघले शायद ५, ७ लाखको हाराहारीमा विदेशतिरबाट जोरजाम पारेको मट्याङ्ग्रा नाश गर्‍यो होला । यसरी केटाकेटी उमेरमै गुलेली खेलेर मट्याङ्ग्राको सत्यानाश गर्ने काम नगरौं । बरु आन्दोलनलाई उचाईमा पुर्‍याएर अलि हामी आदिवासी अभियन्ताहरु तन्नेरी बनौं र मट्याङ्ग्रालाई दुश्मनको सही निशानामा प्रहार गरौं ।
ओली सरकारको औषत दुई वर्ष
ललिता निवास प्रकरणमा पौडेल, नेपाल र भट्टराई